मैले एक बर्षका लागि हस्तमैथुन छाडेको थिएँ’
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, चैत्र १६, २०७४ , 5K जनाले हेर्नुभयो
(यो लेख बिबिसी हिन्दी अनलाइनबाट साभार गरिएको हो । लेख वयस्कको लागि जानकारीमुलक छ । लेखमा अनुभव साझेदार गर्ने व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिएको छ ।)
म पछिल्लो १३ महिनायता हस्तमैथुन नगरी बसिरहेको छु । यसबाट अलग रहनु त्यती सहज थिएन । सत्य भनौ, यसअघि मेरो जिन्दगी यति उत्कृष्ट कहिल्यै थिएन ।
एक अद्भुत अनुभव, हस्तमैथुन छाडेपछि मलाई के कस्ता लाभ मिल्यो ?
२० देखि ३० बर्षको उमेरमा पहिले पहिलो हप्ताका लागि, फेरि केही महिनाका लागि हस्तमैथुनलाई किनारा लगाइदिए । र, यसमा म एक्लो छैन । विश्वभरका लाखौ (केटा मात्र होइन) नोफाप आन्दोलनमा भाग लिइरहेका छन् ।
के हो नोफाप आन्दोलन ?
नो-फेप एक अनलाइन समुदायबीच छेडिएको आन्दोलन हो, जसले अश्लिल सामाग्री नहेर्न र हस्तमैथुन नगर्न प्रेरित गर्छ ।
जब म केवल १९ बर्षको थिएँ, तब मैले सोच्न सुरु गरें कि पोर्न हेर्दा मलाई के असर होला । आफ्ना पिंढी जस्तै, मैले पनि इच्छा अनुसार पोर्न हेर्दै हुर्किएँ । मलाई याद छ कि, जब म १४ बर्षको थिएँ, तब इन्टरनेटमा भित्री बस्त्र खोज्दै आपत्तिजनक तस्वीरसम्म पुगें ।
आफ्नो किशोरावस्थाको अन्तिम चरणमा हालत यस्तो भइसकेको थियो कि, जतिबेला पनि म कोठामा एक्लो हुन्थें । र, मौका मिल्नसाथ पोर्न फिल्म हेर्न थाल्थें ।
पछि मलाई चिन्ता हुन थाल्यो कि, म पोर्न फिल्मको लतमा फस्दैछु । म हिनताबोधले ग्रस्त हुँदै गएँ । मलाई ग्लानी हुन थाल्यो । हार खाइसकेका व्यक्ति जस्तै महसुष गर्न थालें । म युवतीसँग साक्षतकार गर्ने हिम्मत गर्न सक्दिनथें । इन्टरनेटमा अश्लिल सामाग्री हेरेर हस्तमैथुन गर्न वाध्य थिएँ ।
१९ बर्षको उमेरसम्म म कुमार र एक्लो थिएँ । त्यसबेलासम्म मेरो सम्बन्ध गम्भीर भएको थिएन । र, मलाई यौनको बारेमा केहिपनि थाहा थिएन ।
आँखा अगाडि युवतीको नग्न तस्वीर तैरन्थे
जब कुनै युवतीको प्रसंग आउथ्यो, अघिल्लो रात देखेको युवतीको नग्न तस्विर मेरो आँखामा नाच्न थाल्थ्यो । कुनैपनि सग्लो युवतीलाई म मनमनै नग्न बनाइरहेको हुन्थें । यदि उक्त युवतीले मेरो यो मनोदसा थाहा पाउँदो हो त उनले मलाई राम्रो दृष्टिले हेर्ने थिएन ।
म कति रात एक्लो जागा बस्थें । सोच्थें, पोर्नले मेरो जिन्दगीमा के असर गर्‍यो ?
आफ्ना साथीसँग मैले मनको गाँठो फुकाइन । नितान्त व्यक्तिगत कुरा गर्ने चलन थिएन, साथीसँग । source:widekhabr